के लकडाउन खुलेको हो काठमाण्डौमा ! सबैलाई पास दिने भए कसको लागि लकडाउन हो ? (तस्विर सहित) – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/के लकडाउन खुलेको हो काठमाण्डौमा ! सबैलाई पास दिने भए कसको लागि लकडाउन हो ? (तस्विर सहित)
के लकडाउन खुलेको हो काठमाण्डौमा ! सबैलाई पास दिने भए कसको लागि लकडाउन हो ? (तस्विर सहित)
काठमाडौं । काठमाडौंमा पछिल्लो केही दिनयता लकडाउन उल्लं घन गर्ने क्रम बढेको छ । घरमा बस्दा बस्दा मानिसहरु आजित भएर बाहिर निस्कन थालेका छन् । सरकारले अत्यावश्यक काम र अस्पतालमा आकस्मिक उपचार लिनबाहेक घरबाहिर ननिस्कन अनुरोध गरे पनि सडकमा बाक्लो संख्यामा गाडी गुड्ने गरेका छन् । सोमबार मात्र गृहमत्न्त्रालयले लकडाउन कडा बनाउन निर्देशन दिएपनि सडकमा सवारीको ताँती नै देखिन्छ ।
आज केहि हाम्रा पत्रकारसाथीहरु आफ्नो अफिस पुग्दा पनि प्रहरीले आज बाटोमा निकै सोधपुछ गरेको बताएका थिए । उनीहरु हिजो अस्तिको भन्दा आज थप कडाइ गरेको बताएका छन् । हेर्नुहोस् तस्वीरहरु / फोटो सुशील सुनिल श्रेष्ठ
साउन १ देखि सवारी साधनका लागि आयो नयाँ सुचना! !
काठमाडौं मा पुनः लकडाउन